Cixi Fujing Plastic Products Factory Niorina tamin'ny 1990, ny matihanina amin'ny mpanamboatra R & D, famokarana sy ny varotra ny sivana isan-karazany sigara. Ankehitriny dia efa ny mpamatsy lehibe indrindra amin'ny plastika sigara sivana izay efa naondrana any Japana, Amerika, Eoropa, Moyen-Orient, Azia Atsimo Atsinanana sns ny marika ao an-toerana "Joyo" no tena malaza ao Shina.
Fujing no misy ao Cixi tanàna tena mety fifamoivoizana. Mitaky latsaky ny adiny roa ny seranam-piaramanidina lehibe telo (Ningbo, Hangzhou, Shanghai) ao Shina Atsinanana.
Fujing dia mifantoka amin'ny famonjena mpifoka sigara 'ny fahasalamana sy fiainana. Izahay hametraka ny "Paraky Control Research Center" ao Shanghai amin'ny anjerimanontolo sy ny fikarohana Institiota ao amin'ny sivana 2000.Our Afaka manaisotra maherin'ny 90% nikôtinina, tara sy ny hafa misy poizina sy mampidi-doza avy amin'ny sigara fananana.
Fujing manana andianà milina mandeha ho azy, anisan'izany ny mivory, manavaka, fizahan-toetra, nampirina entana sy ny famehezana. Ny mandeha ho azy ny tahan'ny famokarana dia maherin'ny 90%, izay mitana ny vokatra amin'ny vidiny tsara indrindra fampisehoana. Fujing koa no voalohany manana kilasy iray alina atrikasa vovoka-maimaim-poana any Shina.
Fujing amin-kitsimpo mandray ny OEM / ODM na fepetra hafa. Vonona foana izahay mba hanome anao asa fanompoana tsara indrindra sy avo kalitao ny vokatra.